အမ်ပီတီက 4G/LTE ဝန်ဆောင်မှုကို မြို့ကြီးသုံးမြို့၌ စတင်ပေးအပ်
ရန်ကုန်၊ မေ ၃၀ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ 1.8GHz လှိုင်းစဉ်နှုန်း အသုံးပြုခွင့်ရရှိမှုနှင့်အတူ 4G ဝန်ဆောင်မှုကို မြို့ကြီးသုံးမြို့တွင် ယနေ့စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (အမ်ပီတီ) က ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါ 4G/LTE ဝန်ဆောင်မှုကြောင့် ပိုမိုမြန်ဆန်သော မိုဘိုင်းဒေတာအမြန်နှုန်းကို နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်မြို့ကြီးများတွင် အသုံးပြုနိုင်တော့မည်ဖြစ်ပြီး အခြားမြို့များတွင်လည်း.
ဆိုင်ကလုန်းမိုရာကြောင့် ရခိုင်မြောက်ပိုင်း၌ အရေးပေါ်အကူအညီများ လိုအပ်နေ
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “မိုရာ” တိုက်ခတ်သွားမှုကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် အရေးပေါ် အကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်း ဒေသခံများကဆိုသည်။
အမျိုးသား ပညာရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအကြောင်း လေ့လာမိသမျှ
၄ နှစ်ခန့် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှု၊ ပါဝင်သူ ၁၀၀ ခန့်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု၊ အလှူရှင်များ လှူဒါန်းထားသည့် ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိသော်လည်း အမျိုးသား ပညာရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း ပကတိအခြေအနေ အသို့ရှိနေပါသနည်း။
အိန္ဒိယမှ ဒီဇယ်ရထားစက်ခေါင်း ခြောက်လုံး မကြာမီရောက်ရှိမည်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ (ကျပ် ၄၀ ဒသမ ၆၈ ဘီလျံ) တန်ဖိုးရှိ စာချုပ်အရ ဒီဇယ်ရထားစက်ခေါင်းများကို အိန္ဒိယက မြန်မာနိုင်ငံသို့ မကြာမီ တင်ပို့ ပေးပို့သွားမည်ဟု အိန္ဒိယသတင်းစာတစ်စောင်က ရေးသားထားသည်။ မီးရထားစက်ခေါင်း ၁၈ လုံး၏ ပထမအသုတ်ဖြစ်သည့် စက်ခေါင်း ခြောက်လုံးကို လာမည့်လတွင်.
ခွဲထွက်မရဆိုသည့်မူ မချနိုင်သဖြင့် ၂၁ ရာစုပင်လုံတွင် နိုင်ငံရေး ရလဒ်ကောင်းနည်းသွားပြီ
တစ်ရက်ထပ်တိုးပြီးညှိနှိုင်းနေရသည့် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည်းအဝေးတွင် “ပြည်ထောင်စုမှခွဲ မထွက်ရ” ဟူသည့် အခြေခံမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုမပြေလည်သဖြင့် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၌ ရလဒ်ကောင်းထွက်မှု နည်းပါးသွားပြီဖြစ်သည်။
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည်းအဝေး ကျင်းပရက် တစ်ရက်ထပ်တိုး
နေပြည်တော်၊ မေ ၂၇
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည်းအဝေးတွင် စကားလုံးအသုံးအနှုန်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းမှုများ မပြီးပြတ်သေးသည့်အတွက် ညီလာခံကျင်းပမည့်ရက်ကို နောက်ထပ် တစ်ရက်တိုးလိုက်သည်။
နေရာသစ်မှာ ကူးစက်မှုသစ်တို့ ဖြစ်ပွားစေတဲ့ ငှက်ဖျား
ငှက်ဖျားရောဂါ ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှု ဆက်လက်လျော့ကျနေသော်လည်း မြန်မာနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှာမူ ငှက်ဖျားအန္တရာယ်ရှိ ခြင်များ ပေါက်ဖွားရာဖြစ်နေဆဲပင်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံမှုကို ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဟု မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့များရှုမြင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ ဒီနေ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတာဟာ ရပ်တန့်နေတဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မှုတွေအတွက် လမ်းစဖြစ်တယ်လို့ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ငြင်းဆန်ထားတဲ့ မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်းက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက ပြောကြပါတယ်။
ညီလာခံ၌ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် တသဘောတည်းရှိရန် လက်နက်ကိုင်ရှစ်ဖွဲ့ ဆွေးနွေး
မနက်ဖြန်ကျင်းပမည့် ညီလာခံတွင် အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ အစရှိသည့် အခြားအစုအဖွဲ့ လေးခုနှင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရာတွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့အနေဖြင့် တသဘောတည်း ရပ်တည်နိုင်ရန်လည်း ဖြစ်သည်။